Dhaqaale ay madaxtooyada P/land ugu talagashay xoogaga wadaniyiinta oo la dhacay
February 13, 2020 Farah Abdikadir Mohamed 1
GAROWE(P-TIMES)- Kadib dhawaan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Denni uu ku baaqay in xukuumaddiisa laga difaaco dhaliilaha uga imaanaya shacabka iyo xiisada kala dhaxaysa dowladda federaalka Soomaaliya iyada loo adeegsanayo baraha bulshada ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in la dhacay dhaqaale loogu tala galay kooxdaasi.
Kooxdani oo ay abaabuleen shakshiyaad u dhow madaxtooyada Puntland ayaa u badan dhalinyaro, waxaana soo kala dhex galay haatan khilaaf xoogan iyo kala shaki, kadib markii la dhacay dhaqaalihii ugu horeeyey oo wasaarada Maaliyadda Puntland ay ku bixisay baraha bulshada iyo kooxdani oo loogu magac daray xoogaga wadaniyiinta.
Kooxdan oo taageersanayd siyaasada xukuumadda Denni ayaa la sheegay in laga dhacay dhaqaalihii loogu tala galay halka xubno ka tirsan madaxtooyada ay musuq maasuqeen dhaqaalahaasi, waxaana haatan soo if baxaya xogo sheegaya in lacagtaasi ay dhaceen horjoogayaal hogaaminayey kooxdaasi oo xidhiidh dhow la leh dowladda, kuwaas oo kula heshiiyey in ay ka difaacaan Denni iyo xukuumaddiisaba eedaymaha loo jeediyo.
Madaxtooyada Puntland oo xiligani ku hawlan gadista siyaasadeeda ayaa qoratay dhalinyaro badan oo caan ka ah baraha bulshada si ay u iib geeyaan siyaasadeeda uguna difaacaan dhaliil kasta oo loo jeediyo, waxaana madaxweyne Denni uu ku baaqay dhawaan in dhalinyarada Puntland ay difaacaan kana qayb qaataan sare u qaadista Puntland iyaga oo adeegsanaya baraha bulshada ee lagu wada xidhiidho.
Qof lacag ku qaadanaya difaaca dalkiisa iyo dadkiisa waa caadaqaate aan wadani ahayn. Lacagtu waxaay soo jiidataa inta bulshada ugu liciifsan mana aha in dameer dameer kale dhalay la adeegsado oo difaac qaran lagu aamino